အစ္စလာမ့်သမိုင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on March 31, 2013, in အစ္စလာမ့်သမိုင်း, အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ရခိုင်နယ်ရဲ့ မူလဇစ်မြစ် လူမျိုး ဖြစ်ကြောင်း
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ရခိုင်နယ်ရဲ့ မူလဇစ်မြစ် လူမျိုး ဖြစ်ကြောင်း ငါ အခိုင်အမာ ပြောနိုင်တဲ့ အချက် တွေ ရှိနေတယ်။ ရခိုင် စကား ဆိုတာ ဗမာ စကားတစ်မျိုးပါ။ တနည်းအားဖြင့် ရှေးဟောင်း ဗမာစကားထဲက တစ် မျိုးလို့ ပြောနိုင်သလို- အဲ့ဒီ စကားပြော လူမျိုးနဲ့ ရှေးဟောင်း ဘန်ဂါလီ စကားပြောလူမျိုး ဒီနှစ်မျိုးဟာ ဘယ်သူ က အရင် ရခိုင်နယ်ထဲကို ရောက် လာခဲ့သလဲ- ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဘို့ လိုပါတယ်။ သုတေသန လုပ်ဘို့ လိုပါ တယ်။အကြမ်းအားဖြင့် မြန်မာအင်ပါယာကို စတင် ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ပုခံခေတ်က လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပုဂံခေတ် ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ထောင်ဝန်းကျင်ကသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်သမိုင်းက နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ပြီလို့ ရခိုင်သမိုင်း ဆရာတိုင်းက ၀န်ခံ ထား ခဲ့ပါပြီ။ (ပုဂံခေတ် မတိုင်မှီက ရှေးဟောင်း ဗမာစကားပြော လူသားတွေ ရခိုင်နယ်ထဲကို ရောက်ကောင်း ရောက်နိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုလောက်သာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)ရခိုင်ရာဇ၀င် ကျောက်စာများကို ပြန်လှန်ကြည့်ပါ။ ဘယ်စာပေနဲ့ ရှေးခဲ့ပါသလဲ။ တူးဖေါ်ရရှိထားတဲ့ ရှေးအကျ ဆုံး ရခိုင် ကျောက်စာများကို ရခိုင်စာပေပညာရှင်များကို ဖတ်ခိုင်းကြည့်ပါ။ ဖတ်မတတ်တော့ အဆုံးမှာ- ရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတိုင်းမှာ ပူတီး (ရှေးဟောင်း ဘန်ဂါလီ အက္ခရာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ လင်္ကာများ)ကို ဖတ် တတ်သူကို အဲ့ဒီ ကျောက်စာကို ပေးလိုက်ပါ။ သူ ဖတ်ပြီး ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ရွာတစ် ရွာမှာ အနည်းဆုံး ပူတီး ဖတ်တတ်သူ တစ်ဦးစီတော့ စဉ်ဆက် ကျန်ရှိနေပါတယ်။
ဒါဆိုရင်- ရခိုင်နန်းသုံးမှတ်တမ်း၊ ရခိုင်နယ်က ရှေးအကျဆုံး ကျောက်စာများကို ဘယ်သူတွေက မှတ်တမ်းတင် ခဲ့ပါသလဲ။ လက်ရှိ ရခိုင်လို့ ခံယူနေတဲ့ ရှေးဟောင်း ဗမာစကားပြော လူမျိုးစုထဲက ပညာရှင်များက မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပါသလား။ သုိ့မဟုတ် ရှေးဟောင်း ဘန်ဂါလီ စကားပြော လူမျိုးစု ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာများက မှတ်တမ်းတင် ခဲ့ပါသလား- ကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီခေတ်က ရခိုင်နယ်မှာ ပူတီးကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့ စာပေအက္ခရာကို သုံးခဲ့တယ် ဆိုရင်- ရခိုင်နယ်က ရှေး ဟောင်းလူမျိုး က ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်သလား- လက်ရှိ ရခိုင်လို့ ခံယူသူများ ဖြစ်သလား- ဆင်ခြင်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ပူတီးစာပေကို မသုံးတဲ့ လူမျိုးများသာ ရခိုင်မှာ ရှိနေတယ်။ ဘုရင့်မှတ်တမ်းများကို ကျောက်ထက် အက္ခရာ တင်ဘို့လောက်ပဲ ပူတီးစာပေ တတ် မြောက်တဲ့ ပညာရှင်များကို ပင့်ယူပြီး မှတ်တမ်းတင်ခိုင်းခဲ့တယ် ဆိုရင် လည်း- ယုတ္တိက အလွန်မဲ့နေပါလိမ့်မယ်။ လူတွေ ဟာ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ကိုယ့်စာပေကိုပဲ သုံးစွဲခဲ့ကြတာပါ။
ရခိုင်စာပေ လို့ခေါ်တဲ့ ပူတီးဇတ်ပျက် အက္ခရာတင် စာပေများနဲ့ မှတ်တမ်းက ရခိုင်ကျောက်စာတွေထဲမှာ အလွန့် အလွန် နောက်ကျတဲ့ ကျောက်စာများသာ ဖြစ်ပါတယ်။- ကျောက်စာပညာရှင်များ သမိုင်းပညာရှင်များ သေချာ အောင်လေ့လာ လိုက်ပါ။ ပြီးမှ- ရိုဟင်ဂျာနဲ့ အခုပြောနေတဲ့ ရခိုင် ဘယ်သူတွေက ရခိုင်နယ်ရဲ့ ဇစ်မြစ်လူမျိုး ဖြစ် သလဲ။ ဘယ်သူတွေကို 82 Law နဲ့ ဆုံးဖြတ်သင့်သလဲ- အနုလုံ ပဋိလုံ ဆင်ခြင်လိုက်ပါ-လို့ သတိပေးပါရစေ။
အစ္စလာမ် သာသနာကို ကူးပြောင်းလိုက်လို့ မတရားသဖြင့် အနိုင်ကျင့်မယ် ဆိုရင်တော့—၊ ဆက်လက် အနိုင် ကျင့်နေသူများ အားလုံး- နောက်ဆက်တွဲ တရားခံများထဲမှာ ပါသွားပါလိမ့်မယ်။
This entry was posted on November 26, 2012, in အစ္စလာမ့်သမိုင်း, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
၁။ အမှန်တရား၏မွှေးရနံ့များ ဝေးလံကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့လာသော်လည်း၊ ကာဖိရ်သွေဖည်သူတို့မှာ ထိုရနံ့ကို ရှုရှိုက်ခွင့်မရကြ၊ အခြားသူများ ကတော့ ထိုရနံ့ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
၂။ အစ်္စလာမ်သာသနာ့ရောင်ခြည်စတင်၍ ကွန့်မြူးလာသောအခါ၊ လူမိစ်္ဆာများမှာတဖြည်းဖြည်းကြောက်ရွံ့လာသည်မှာ လင်းနို့များကဲ့ သို့ဖြစ်လာပြီး ၎င်းတို့တွင်ရှိသည့် အင်အား အားလုံးကို အသုံးချ ကာ အခြားသူများအား ၎င်းတို့၏လမ်းမှားနေသည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သို့ သက်ဝင်ယုံကြည်စေခဲ့သည်။
၃။ သဘာဝမကျသည့် မဟာဗျုဟာများကျဆုံးသွားသောအခါ၊ ၎င်းတုိ့ ၏ရည်မှန်းချက်များ ပေါက်မြောက်စေရန် ၎င်းတို့သည် အခြားနေရာ များမှထောက်ခံမှုရရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
၄။ ၎င်းတို့သည် မတတ်သာသည့်အဆုံးအမှန်တရားကို ဥစ်္စာဓန၊ မိန်းမ၊ ရာထူးရာခံများနှင့်တန်စိုးလက်ဆောင်ပေး၍ လဲလှယ်ရန်ကြိုးစား ခဲ့သော်လည်း ယခုလိုငြင်းဆိုခြင်းကို ခံခဲ့ရပြန်သည်
“တကယ်လို့အသင်တုိ့အနေနဲ့ နေနဲ့လကို ကျုပ်ရဲ့လက်တစ်ဖက်စီမှာ ယူဆောင်ပေးရင်သော် လည်းကောင်း၊ ဒီလောကမှာရှိတဲ့ စည်းစိမ်ဥစ်္စာ အားလုံးကို ကျုပ်ကိုလာပေးရင် သော်လည်းကောင်း၊ ကမ်္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အဖိုးတန်ကျောက်သံပတ်္တမြားအားလုံးကို ကျုပ်ခြေထောက်အောက်မှာ လာခင်းပေးရင်တောင် ကျုပ်ဟာ အလ်္လာဟ်အရှင်မြတ်စေခိုင်းတဲ့ တာဝန် ၀တ်္တရားကို ဘယ်တော့မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီရုပ်တုတွေဟာ အစစ်အမှန်ကိုးကွယ်ရာအရှင်မဟုတ်ဘူး၊ အမှား တစ်ခုဟာဘယ်တော့မှ အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး””
၁။ ကာဖိရ်များက အမှန်တရားကို လမ်းပြပေးပြီး အခြားသူများအား အစ်္စလာမ် သာသနာဝင်အဖြစ်ကြေညာခဲ့သူများကိုအမျိုးမျိုး ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှုများစတင်ပြုလုပ်လာခဲ့ကြပြီး ထိုသာသနာတော် အသစ်ကို လက်ခံယုံကြည်သူများနှင့် အမှန်တရား၏အလင်းရောင်ကိုဖြန့်ချိပေး နေသူများအားလုံး တူညီသည့် ကြမ်္မာဆိုးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူ လက်တွဲခဲ့သူများသည်လည်း မည်မျှသည်းခံနိုင်သည်ကို စမ်းသပ်ခံခဲ့ရပြန်သည်၊ ထိုသို့ဇွဲနပဲကြီးစွာ သည်းခံမျိုသိပ် ခဲ့ရသူများမှာဟဇရတ်ဘီလာလ်(ရသွေ့)၊ ဟဇရတ်စူဟိုင်က်(ရသွေ့) ၊ဟဇရတ်အမရ်(ရသွေ့)၊ ဟဇရတ်စူမိုင်ယာ(ရသွေ့)၊တို့ပင်ဖြစ်သည်။
၂။ ၎င်းတို့အထဲမှ တချို့သည် မိမိတို့နှလုံးသားထဲမှအီမာန်(ယုံကြည်ချက်) အတွက် ဘေးကင်းရာဖြစ်သည့် အဗီဆီနီးယားသို့ ပြောင်းရွှေ့သွား ခဲ့ရသည်။ ကူရိုင်ရ်ှတို့သည် ၎င်းတို့၏သြဇာအာဏာကိုအသုံးပြုပြီး ပြောင်းရွှေ့သွားသူများကို ပြန်လာစေရန် ကြိုးပမ်းကြပြန်သည်။
၃။ ၎င်းတို့သည် ဤသို့ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှုမရပြန်သဖြင့်၊ မွတ်စလင်မ်များကို ကြဉ်ဖယ်သည့်ပြစ်ဒဏ်ပေးပြန်သည်၊ မွတ်စလင်မ် တို့အပေါ် ပြင်းထန်သည့်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှု များ ကို ပြဌာန်းစည်းကြပ် ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့်မွတ်စလင်မ်တို့သည် ဆာလောင်ငတ်မွတ်သည့် ဒုက်္ခကို အလူးအလဲခံစားရပြီး သစ်ဥသစ်ဖုများကိုသာ အဟာရ အဖြစ် စားသုံး ခဲ့ကြရသည်၊ သို့သော်လည်းထိုကဲ့သို့ဒုက်္ခပင်လယ် ဝေခဲ့သည့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော အချိန်ကာလကြီးကို သုံးနှစ်သုံးမိုးခံပြီးသော အခါ ၎င်းတို့ထံတွင် မပြောင်းရွှေ့နိုင်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံ များသာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
၄။ နောက်ဆုံးတွင်တော့၊ အမှန်တရားကို လက်ကိုင်ထားကြသူများသည် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို ဆွတ်ခူးရရှိပြီး၊ အမှောင်လမ်းကို လျှောက် လှမ်းခဲ့သူများမှာမူရှုံးနိမ့်ခြင်း၏ခါးသီးသော အရသာကို မြည်းစမ်းခဲ့ ရပါသည်။
၅။ အမှန်တရားကိုလက်ကိုင်ထားသူများက အောက်ပါအတိုင်းလက်တွေ့ သရုပ်ပြသခဲ့၏-
– ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်ငတ်မွတ်မှုဒဏ်ကို အလူးအလဲခံစားနေရချိန်တွင် ပင်အမှန်တရားကို မြဲမြံစွာလက်ကိုင်ကျင့်သုံးခဲ့သေးလျှင် အပူအပင် ကင်းပြီးစည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့်နေရချိန်ကျမှ လမ်းမှန်ကိုစွန့်လွှတ်၍ လမ်းမှားကိုလိုက်ရန်မှာ လုံးဝလက်မခံနိုင်သည့်ကိစ်္စဖြစ်သည်။
– ဤမမြဲသည့်ကမ်္ဘာလောကတွင် ရရှိခဲ့သည့် စည်းစိမ်ချမ်းသာများနှင့် ဒီးန်သာသနာ၏သဘောတရားများကို အလဲအလှယ်လုပ်၍မရနိုင်ပေ။
– မှားယွင်းနေသူများသည် ၎င်းတို့၏အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့်အဖျက် အမှောင့် လုပ်ငန်းများကိုကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ကြစေကာမူ အီမာန် သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ၏ယုံကြည်ချက်ကို ယိမ်းယိုင်အောင် စွမ်း ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
– မွတ်စလင်မ်တို့ရဲ့ရင်ထဲကအီမာန်(ယုံကြည်မှု) မှာခိုင်မာလှသဖြင့် ၎င်းတို့ကို ဥစ်္စာဓန၊ ရာထူးအဆင့်အတန်းတို့ဖြင့် စည်းရုံးသိမ်းသွင်း ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ပေ။
– ဥစ်္စာဓနကိုအသုံးပြုပြီး ကာဖိရ်(သွေဖည်သူ)များသည် မွတ်စလင်မ် တို့ကိုထပ်ခါတလဲလဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း၊ မွတ်စလင်မ်တို့မှာ အလ်္လာဟ်ကိုသာလျှင်ယုံကြည်အားထားရင်း မိမိတို့အီမာန်ကိုကာကွယ် နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်နှင့်သေလွန်သည့်အခါ တို့၌ အောင်မြင်မှုနှင့်သာ တွေ့ကြုံခဲ့ကြသည်။
– လူတစ်ယောက်သည် မိမိအီမာန်ကို ဥစ်္စာဓနအတွက် စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါက ၎င်းင်းသည်အမြဲတမ်းဆုံးရှုံးနေမည်ဖြစ်သည်။
– မွတ်စလင်မ်တို့၏အောင်မြင်မှုအစစ်အမှန်မှာ နောင်အာခေရသ်(တမ လွန်)ဘ၀ပင်ဖြစ်သည်။ဤကမ်္ဘာလောကသည်အာခေရသ်တွင်သီတင်း သုံးနေထိုင်ရန် အတွက်ပို့ဆောင်ပေး သည့်ယာဉ်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်သည်။
This entry was posted on October 7, 2012, in အစ္စလာမ့်သမိုင်း, အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
တမန်တော်ယူစွဖ် – Prophet J၀seph
တစ်ဆူတည်းတစ်ပါးတည်းတည်ရှိတော်မူသော၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းစတဲ့ ချို့တဲ့မှုအပေါင်းကင်းစင်တော်မူသော၊ ဖန်ဆင်းရှင် တစ်ဆူတည်းသော ထာဝရဘုရားဆိုတဲ့ တစ်ဆူတည်းသောဘုရားယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ ဘာသာတရားများဖြစ်ကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဂျူးဘာသာတွေဟာ တမန်တော်ယူစွဖ်ကို တမန်တော်တစ်ပါးအဖြစ် ယုံကြည် မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ ဂျူးဘာသာတရားတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ တမန်တော်တွေရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးကျမ်းဂန်ရဲ့ သွန်သင်ချက်တွေကို ပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုး ပြုလုပ်ပြီး၊ တစ်ဆူတည်းသောဘုရားကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ တမန်တော်တွေရဲ့ သွန်သင်ချက်တွေ သွေဖည်ငြင်းဆန် ပုန်ကန်ခြားနားပြီး၊ တမန်တော်တွေကို ဘုရားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသားတော်တွေအဖြစ်လည်းကောင်း ခ၀ပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တမန်တော်ယူစွဖ်သခင်မြတ်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဗီဒီယိုအနေနဲ့ အီရန်နိုင်ငံက ရိုက်ကူးထားတာကို ပြန်လည် ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုကို တင်ပေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအပါအ၀င် အခြားသောဘာသာဝင်တွေကို ကြည့်ရှုစေချင်လို့ပါ။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ တမန်တော်တွေဟာ လူသားတွေရဲ့ မှားယွင်းနေတဲ့ အယူဝါဒတွေကို မည်သို့မည်ပုံ ပြုပြင် တည့်မတ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ လူတွေကို မည်သို့မည်ပုံ တရားလမ်းမှန်ကို ပို့ပေးခဲ့ကြတယ်။ တစ်ဆူတည်းသော ထာဝရဘုရားကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာအောင် မည်သို့မည်ပုံ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို သိစေချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်မှာတော့ တမန်တော်တွေရဲ့နေရာကို အခြားသူ အစားထိုးလို့ မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တမန်တော်တွေဆိုတာဟာ အလွန် အင်မတန် မြင့်မြတ်သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ မဟာလူသားကြီးတွေပါ။ ဒီလို တမန်တော်တွေရဲ့ နေရာမှာ အခြားသူ သရုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကျနော်တို့ မွတ်စလင်မ်တွေက ဟာရမ် (ထာဝရဘုရားသခင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က တားမြစ်ထားတော်မူသောအရာ)လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
သို့သော် ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ဗမာလူထုအတွက် အရမ်းကို အရေးကြီးတယ်လို့ ကျနော်တို့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တမန်တော်ယူစွဖ်ဟာ ရုပ်ထု၊ ရုပ်ပွား၊ ဆင်းထုစတဲ့ လူသားလောက်ပင် မြင့်မြတ်ခြင်းမရှိတဲ့ အရာတွေကို ခ၀ပ်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့သူများအဖြစ်ကနေ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်မင်းမြတ်အပါအ၀င်၊ မှူးကြီးမတ်ရာ သေနာပတိကြီးများ၊ ၀န်ကြီးများအပါအ၀င် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို အရာခပ်သိမ်းကို စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသော၊ ထာဝရတည်ရှိတော်မူသော၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် တစ်ဆူတည်းတစ်ပါးတည်းကိုသာလျှင် ခ၀ပ်ကိုးကွယ်တဲ့ မွတ်စလင်မ်များဖြစ်အောင် မည်သို့မည်ပုံ စွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မြန်မာလူထုသိစေချင်လို့ပါ။ မြင်စေချင်လို့ပါ။
တမန်တော်ယူစွဖ်ဟာ ဘာသာစကား မတူ၊ ဘာသာတရား မတူ၊ ဆွေးမျိုးညာတိ မရှိ၊ အမိအဘကလဲ တစ်ကွဲတစ်ပြား၊ အသားအရောင်ကလည်း မတူ၊ လူမျိုးကလည်း ကွဲပြားစတဲ့ စတဲ့ အချက်တွေရှိပေမယ့် ကိုယ်တော်သခင်ဟာ သူ သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ တစ်ဆူတည်း၊ တစ်ပါးတည်းသော၊ ထာဝရတည်ရှိတော်မူသော၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ ကင်းမဲ့တော်မူသော၊ အတုမရှိသော ထာဝရဘုရား စကြ၀ဠာခပ်သိမ်းအား အဆင့်ဆင့် ဖန်ဆင်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ခ၀ပ်ကိုးကွယ်လာအောင်၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုအများစုကြီးကို မွတ်စလင်မ်တွေဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ပုံပြင်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သမိုင်းပါ။ အစ္စလာမ်ဟာ ပုံပြင်တွေ၊ ဒဏ္ဍာရီတွေ၊ ဇာတ်နိပါတ်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သာသနာ အလျဉ်း မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုပါပဲ အစ္စလာမ်ရဲ့ကျမ်းစာ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဟာလည်း သင်္ဃာယနာတင်စရာ မလိုပါဘူး။ ပြန်လည် ဆန်းစစ်တည်းဖြတ်သုံးသပ်စရာ မလိုပါဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်သွားသော်လည်း မူရင်းပကတေ့အတိုင်း လက်ရာခြေရာ မပျက်မပြတ် တည်ရှိနေဆဲ့ပါပဲ။ အစ္စလာမ်မှာ အရာရာတိုင်းအတွက် အထောက်အထားတွေ အခိုင်အလုံရှိနေပါတယ်။
အကယ်၍ ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကို ကြည့်ရှုပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်များ တစ်ဆူတည်း၊ တစ်ပါးတည်းသော၊ ထာဝရတည်ရှိတော်မူသော၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ ကင်းမဲ့တော်မူသော၊ အတုမရှိသော ထာဝရဘုရား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ခ၀ပ်ကိုးကွယ်သောသူဖြစ်လာခဲ့ရင်ဖြင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်သာလျှင် ချီးမွှမ်းခြင်းအပေါင်းကို ခံယူထိုက်တော်မူပါပေတယ်။ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သေးသောသူများအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်လိုတဲ့စိတ်ကလေး ဒီဗီဒီယို ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးကို ကြည့်ရှုပြီး တစ်ယောက်တစ်လေရခဲ့ပါမူ ဒီဗီဒီယိုကို ကျွန်တော်တို့ မျှဝေပေးခြင်းအားဖြင့် လူသားတစ်ဦးရဲ့တာဝန် ကျေပွန်ခဲ့ပြီဟု မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံလိုတဲ့အချက်ကတော့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်မှုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဘာသာပြန်ကျွမ်းကျင်သူတွေ ပေါင်းစုပြီး မြန်မာဘာသာကို ပြန်ဆိုထုတ်လွှင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ဗမာလူထုအဖို့ အထူးပင် အကျိုးရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တတ်စွမ်းနိုင်သူများ စွမ်းဆောင်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၁)
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၂)
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၃)
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၄)
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၅)
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၆)
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၇)
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၈)
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၉)
တမန်တော်ယူစွဖ် – အပိုင်း (၁၀)
This entry was posted on September 23, 2012, in ဗီဒီယို, အစ္စလာမ့်သမိုင်း, အတ္ထုပ္ပတ္တိ, အထူးကဏ္ဍ.	Leaveacomment
အစ္စလာမ့်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ လူဖြစ်လာကြတဲ့သူတွေ စစ်မှန်ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားနဲ့တကွ သိရှိသူ အရမ်း အရမ်းကို နည်းပါးလှပါတယ်။ ဒါကလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ အကြောင်းတွေထဲက တစ်ချက်ကတော့ဖြင့် အာဏာရှင် ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက် မှန်သမျှကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဘဲ။ သူဟာ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တရားဝင်ဘာသာစကားကြီးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အာရဗီဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတက္ကသိုလ်မှာ သင်ကြားမှု မပြုစေခဲ့ဘူး။ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်မ်လူဦးရေဟာ အနည်းဆုံး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံရှိပါတယ်။ အကယ်၍သာ အာရဗီဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတက္ကသိုလ်မှာ သင်ကြားပေးမယ်ဆိုရင် အချည်းအနှီး မဖြစ်ယုံမက နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က တရုတ်သွေးနှောဖြစ်တော့ ဒီအချက်ကို အကြောင်းပြုပြီး အာဏာကို ဆုံးရှုံးရမှာ အရမ်းကို ကြောက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ လူထုရဲ့ အမျက်ဖြေဖို့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတွေရဲ့ဘက်ကို လှည့်ပေးပါတော့တယ်။ ကုလား၊ ကုလား ဆိုတဲ့အသံတွေ မကြားချင်မှ အဆုံး။ ရုပ်ရှင်ဖွင့်ရင်လည်း ဒီအသံကြားရတယ်။ ၀တ္ထု ဖတ်ရင်လည်း ဒီစကားလုံးကို ခဏ ခဏ တွေ့ရတယ်။ အခုဆို ပိုဆိုးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုနဲ့ တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တာနဲ့ ကုလားဖြစ်သွားပြီ။ အစ္စလာမ်ကိုလဲ ကုလားဘာသာလို့ပဲ လူအများ နားလည်ထားကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီလိုဖြစ်အောင် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ် နည်းပါး တိုင်းပြည်ကို လက်နက်အားကိုးနဲ့ သိမ်းပိုက်၊ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်၊ ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘ၀ရောက်အောင် ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီး အာဏာရှင်ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေက နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခခံပြီး၊ ကြိုးစားခဲ့ကြလို့ပါဘဲ။ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက တော်တော်များများ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်အဆင့်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင် အစ္စလာမ်အကြောင်း မသိကြဘူး။
အမှန်တကယ်ကတော့ မွတ်စလင်မ်တွေ သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ တမန်တော်မြတ်ဟာ အာရဗ်လူမျိုးတစ်ဦးပါ။ အိန္ဒိယသားတစ်ဦး မဟုတ်ပါဘူး။ ဗမာပြည်ရဲ့ သမိုင်းမှာ အာရဗ်လူမျိုးကို ကုလားလို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ထုံးစံမရှိပါဘူး။ အာရဗ်လူမျိုး၊ အာရေဗျလူမျိုးလို့ဘဲ ခေါ်ကြ၊ ရေးကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ အာရဗ်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တမန်တော်မြတ်ရဲ့ သာသနာကို ဘာကြောင်း ကုလားဘာသာ၊ ကုလားသာသနာလို့ ခေါ်နေကြမှန်း မသိပါ။ အိန္ဒိယသားစစ်စစ်၊ လုံးဝ ရေမရောတဲ့၊ ဗမာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေထဲက မည်သည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမှ မဟုတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့ သာသနာကိုကြတော့ ကုလားဘာသာလို့ ဘယ်သူမှ ခေါ်သံ၊ ပြောသံ၊ ရေးသံ မကြားဘူးပါ။ အရမ်းကို ထူးဆန်းပါတယ်။ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား မှန်သမျှကို ကုလားလို့ ခေါ်တဲ့သူတွေက ဒီအချက်မှာကြတော့ ဘာရယ်ကြောင့် ကုလားလို့ မခေါ်ရတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ကနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သွားတာနဲ့ ကုလားကြီး၊ ကုလားလေး၊ ကုလားမလို့ ခေါ်တတ်ကြတဲ့သူတွေဟာ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ လှည့်စားခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေပါဘဲ။ သနားစရာလေးတွေပါ။
အခု ဗီဒီယိုလင့်ခ်လေးတွေ ချိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကောင်းကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ အမေရိကန်ရဲ့ နာမည်ကြီး သတင်းဌာနက ရိုက်ကူးထားတာ။ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့ ဘယ်လို ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အင်ပါယာကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့သလဲဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ အနောက်ကမ္ဘာက မွတ်စလင်မ်တွေ ဒီလို ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အင်ပါယာကြီး ပြန်လည် တည်ဆောက်မှာကို အရမ်းကြောက်လွန်းလို့ ဗမာပြည်မှာ မွတ်စလင်မ်ဆိုတာနဲ့ ကုလားလို့ ပြောသလို အနောက်တိုင်းမှာ မွတ်စလင်မ်ဆိုတာနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားလို့ ပြောချင်နေကြပါတယ်။ သို့သော် တရားဝင်အထောက်အထား မရှိဘဲ ပြောလို့မရဘူး။ ဒါတော့ ဗမာပြည်နဲ့ နည်းနည်းလေးကွာပါတယ်။ အစ္စလာမ့်အင်ပါယာအကြောင်း အင်္ဂလိပ်စကား နားလည်သူတွေ ကြည့်ရှုနားဆင်သောတဆင်လို့ ရပါတယ်။
Part 1: Prophet Muhammad and rise of Islam
This entry was posted on September 22, 2012, in ဗီဒီယို, အစ္စလာမ့်သမိုင်း.	1 Comment